6 तपाईंको ब्रान्डको प्रचार गर्नको लागि ट्विटरको फाइदा Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 31, २०२० शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
त्यहाँ धेरै मिडिया र टेक्नोलोजी पंडितहरू बाहिर छन् ट्विटरको निधनको बारेमा कुरा गर्दै। म इमान्दार हुन सक्छु कि, व्यापार rumblings को बावजुद, म अझै प्लेटफर्म मा अविश्वसनीय मूल्य पाउन। यदि ट्विटरबाट कसैले यो पढिरहेको छ भने, यहाँ छिटै म व्यापार परिणामहरु सुधार गर्न को लागी गर्छौं।
प्रयोगकर्ताहरूलाई स्वचालित ट्वीटहरूको लागि भुक्तान गर्नुहोस्। ओह - म अब चिल्लाहरु सुन्न सक्छु, तर यदि यो सस्तो थियो भने, म मेरो समाग्री स्वचालन मार्फत प्रचार गर्न भुक्तान गर्छु। र म खुसी छु कि स्प्यामरहरू तुरून्तै प्लेटफर्म छोड्न। ट्विटरमा स्वचालित स्प्यामिंग प्रचलित छ किनकि यो नि: शुल्क छ ... कुनै अन्य कारण छैन।
विकासमा गुणस्तर र सान्दर्भिकतामा फोकस बढाउनुहोस्। म ट्विटरमा प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई पछ्याउन छैन। यहाँ एक ट्विट छ जुन मेरो भावनाहरु लाई समाहित गर्दछ:
कहाँ छ "सुझाव दिनुहोस् मैले कर्डाशियन अनुसरण गर्छु" बटनमा छ @Twitter? सीसी @ समर्थन
- Douglas Karr (@douglaskarr) मार्च 28, 2016
त्यहाँ तपाईं जानुहोस् ... मलाई विश्वास छ ती दुई परिवर्तनहरूले ट्विटरसँग सम्बन्धित व्यापार परिणामहरूलाई रूपान्तरण गर्नेछ। अवश्य, तिनीहरू [यहाँ सामाजिक नेटवर्क सम्मिलित गर्नुहोस्] भन्दा बढि प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा गर्व गर्न सक्षम हुनेछैनन्, तर यसले संक्षिप्त संचार प्लेटफर्मको लागि प्रेम र प्रशंसा फिर्ता ल्याउँदछ जसले इन्टरनेटमा परिवर्तन ल्यायो।
% 36% मार्केटरहरूले ट्वीटरको माध्यमबाट ग्राहक प्राप्त गरेका छन्
त्यसोभए कसरी कुनै ब्रान्डले ट्विटरलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दछ? फलोक.comले तपाईको इन्फोग्राफिकको विकास गरी तपाईलाई बढि सment्लग्नताका लागि र यी छवटा रणनीति प्रयोग गरी बढि ब्यापार नतिजाका लागि प्लेटफर्म लाभ लिनका लागि
गर्न नडराउनुहोस् तपाइँको ब्रान्ड प्रचार गर्नुहोस् ट्विटरमा यसको आफ्नै खाताको रूपमा! ब्रान्डमा औसत मानिसहरू भन्दा ठूलो अनुसरण गर्दछ।
प्रयोग गर्नुहोस् ट्विटर विज्ञापन! तपाईं आफ्नो ग्राहक वा ग्राहक सूची अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अवस्थित ग्राहकहरू वा उनीहरू जस्तो देखिने मानिसहरूलाई आफ्नो विज्ञापन लक्षित गर्न श्रोता खण्डहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
ट्विटर एक हो जाँदाजाँदै मञ्च, तपाईंलाई अनुयायीहरूसँग सम्पर्कमा आउनको लागि एक अद्वितीय अवसर प्रदान गर्दै जुन किताब पढ्न चाहँदैनन्, तिनीहरू केवल द्रुत उद्धरण, मजाक, वा सल्लाहको टुक्रा चाहन्छन्।
सँधै समावेश गर्नुहोस् कल-टु-एक्शन, चाहे यो रिट्वीट, डाउनलोड, कल, रेजिस्टर, वा कुनै अन्य आदेश हो।
तपाइँको अद्यावधिक संग बृद्धि लिंक र छविहरू गहिरो सment्लग्नता र साझेदारीको लागि!
ह्यशट्याग तपाईंको ट्वीटहरू ताकि तपाईं खोजीमा फेला पर्नुहुनेछ। र तपाईंको ट्वीटहरू प्रकाशित गर्न निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईंको अनुयायीहरू सुन्न सुन्न योग्य छन् (सप्ताहन्तमा जस्तै!)। हामी हाम्रो ट्वीटहरू सबै समयमा पनि दोहोर्याउँदछौं।
यहाँ इन्फोग्राफिक छ, ट्विटर पावर प्रयोगकर्ता चीट पाना.
टैग: ब्रान्ड प्रचारधोखा पानासूची जाँच गर्नुहोस्पदोन्नतिरीट्वीटtwitterट्विटर संलग्नताट्विटर मार्केटिंग
अप्रिल 17, 2017 मा 7: 52 एएम
ट्विटर धेरै उपयोगी हुन्छ यदि सही प्रयोग भइरहेको छ भने।
मैले महसुस गरें कि मेरो प्रयोगकर्ता संख्या ठूलो संख्यामा बढेको छ
मेरो सामग्री प्रासंगिक र प्रयोगकर्ताको लागि अधिक जानकारीमूलक थियो।
धेरै यो जानकारी पोष्ट गर्न को लागी धन्यवाद यो पोष्टले ट्विटरमा काम गर्ने मेरो तरिका सुधार गर्न र व्यापक रूपमा यसलाई अधिक प्रयोग गर्नमा मद्दत पुर्‍यायो।